« Aza matahotra, fa mandehana… »
Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny stranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady Ity ny fitaovana entitsika manomana ny alahadin'ny Paka ao antrano. Jereo fa misy ny tele mandefa mivantana lamesa ary koa ny RDB sy ireo radion'ny diosezy.
Ny «Coronavirus» sy ny fomba fiatrehana azy
Benirina il y a 1 année
Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny stranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 12 aprily izao, alahadin'ny Paka.
Alahady 5 aprily Alahady sampankazO
Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny stranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady Ity ny fitaovana entitsika manomana ny alahadin'ny Sampankazo ao antrano. Jereo fa misy ny tele mandefa mivantana lamesa ar koa ny RDB sy ireo radion'ny diosezy
NY HIRA SY NY FIVAVAHANA ANY AM-PIANGONANA
P. Mamy Augustin, SdB il y a 1 année
Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny stranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady
Des pasteurs proches du peuple, les mesures drastiques ne sont pas toujours bonnes
Lors de la messe à Sainte-Marthe, François a prié pour les malades mais aussi pour les pasteurs afin qu'ils prennent des mesures pour ne pas laisser seul le peuple de Dieu et les accompagnent avec le réconfort de la Parole de Dieu, des sacrements et de la prière
Hafatry ny Biraon'ny FEM
Manasa antsika ho tony sy hivavaka hasivianandro
Raha fintinina: Manasa antsika rehetra izahay Biraon’ny Fivondronamben’ny Eveka mba hiombona ka hanao vavaka hasivianandro manomboka ny 19 martsa. Manasa antsika hifampilaza ny tokony hatao na any amin’ny toeram-pitsaboana na any am-piangonana na any am-pianarana na eny an-dàlana... Mansa antsika ho tony.